GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR : Maro ireo entana azo atao fanomezana ho an’ ny reny | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR : Maro ireo entana azo atao fanomezana ho an’ ny reny
By Nirinamai 28, 2015, 21:24 7
Nanomboka tamin’ ny 27 mai lasa teo ny GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR izay hetsika ara-barotra karakarain’ ny MADAVISION. Tsy hivezivezy izay mitady ho atao fanomezana ho an’ ny reny amin’ ny fetin’ izy ireo amin’ ny Alahady ho avy izao satria misy ny zavatra rehetra azo atao fanomezana ao, hoy Hery RANDRIANASOLO tompon’ andraikitry ny MADAVISION. Maro ireo tolotra omen’ ny mpiara miasa amin’ izy ireo izay miisa 250 ka manana trano eva 300 afahan’ ny mpanjifa misafidy fitafiana hiatrehana ny vaninandron’ ny ririnina, hoy izy. Mitohy hatrany, ihany koa ny fisian’ ny « espace de stockage ». Nampiavaka ity hetsika faha roa tamin’ ity taona ity ny fisian’ ny trano eva manokana ahitana ireo asa tanana malagasy satria miala asandratra ny vita gasy, hoy hatrany izy.
Nomarihany fa « boisson officiel » ny hetsika ny orinasa Natur’Eau izay mamokatra rano vaovao ary mbola manohana ity hetsika ara-barotra ity hatrany ireo teo aloha. Amin’ ny alahady 31 may kosa vao hifarana ny hetsika.
Interview : Hery RANDRIANASOLO
[image_slider link= »full_url_link » source= »full_image_source »] GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR [/image_slider]
TAGbraderie grande madagascar MADAVISION
Previous PostPATRIARKA THEODORE II : tonga eto Madagasikara izy Next PostCOSAFA CUP : resy teo amin' ny manasa-dalana ny BAREA
HARILALA RAMANANTSOA ( MADAVISION ) : hitondra paik’ady tsotra sady mahomby mba hananana tanana mendrika.
HARILALA RAMANANTSOA : tanora maro no miara-miasa aminy ankehitriny.
7 thoughts on “GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR : Maro ireo entana azo atao fanomezana ho an’ ny reny”